Wararka Maanta: Isniin, Apr 18, 2022-Abwaan aad uga hadli jiray arrimaha siyaasada oo Muqdisho lagu dilay
Dilkiisa ayaa dhacay xilli uu Abwaanka ka soo baxayay Masaajid ku yaalla degmada Kaxda oo salaadii Makhrib uu ku soo dukaday.
Lama garanayo sababta loo dilay iyo cidda dilkiisa ka dambeysa. Waxaana kooxda dilkiisa fulisay ay markiiba ka baxsadeen goobta uu falku ka dhacay.
Marxuumku wuxuu caan ku ahaa ka hadlida arrimaha siyaasada ee taagan gaar ahaan wuxuu aad u dhaliili jiray siyaasiyiinta mucaaradka.
Wuxuu maalmo ka hor u ololeynayay in lasii daayo kursiga Fahad yaasiin, isagoo raysal wasaare Rooble ugu baaqay inuu kursigaas fasaxo.